သူတို့ကိုအကုန်ထုတ်ပစ် !!! ယခုလူတိုင်းလုပ်နိုင်သောရိုးရှင်းသောအရာ ၄ ခု။ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု
သူတို့ကိုအကုန်ထုတ်ပစ် !!! ယခုလူတိုင်းလုပ်နိုင်သောရိုးရှင်းသောအရာ ၄ ခု။
သြဂုတ်လ 22, 2021 လှုပ်ရှားမှုသတိပေးချက်များ, သတင်းနှင့်အထူးများ 0
အာဖဂန်နိုင်ငံသားတိုင်း-အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ ကလေးများ၊ အသက်ကြီးသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများသည်ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါတို့အားလုံးကိုသူတို့ကိုထုတ်ရမယ်။ ပြည့်ဝပြီးပြည့်စုံသောဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်ကျင့်ဝတ်နှင့်လက်တွေ့ကျသောလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဤကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထောက်ခံရန်လူတိုင်းလုပ်နိုင်သောရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုရှိသည်။
သင့်အသံကိုမြှင့် တင်၍ သူတို့၏အသံကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားသူများကိုခေါ်ရန်သင်ယခုလုပ်နိုင်သောရိုးရှင်းသောအရာ ၄ ခုရှိသည်။
အောက်ပါစာတမ်းပလိတ်ကို download လုပ်ပြီးဖြည့်ပါ။ (သင်၏နိုင်ငံနှင့်သင်၏အမည်ကိုဖြည့်ပါ) ။
မင်းရဲ့ ၀ န်ကြီး/နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးရဲ့နာမည်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကြည့်ပြီးဖြည့်ထားတဲ့စာမိတ္တူကိုသူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။
Template ၏ MS Word ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ (သို့မဟုတ်အောက်ပါစာသားကိုကော်ပီကူးထည့်ပါ)
အာဖဂန်နိုင်ငံသားတိုင်း စွန့်စားမှု - အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ ကလေးများ၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းသူများ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အမေရိကန်သည်လက်ရှိဘေးလွတ်ရာနေရာများမှလူများကိုကူးပြောင်းရန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလေကြောင်းလိုင်းများကို ၀ င်စေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတို့သည်လေဆိပ်အပြင်ဘက်နှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌၎င်းတို့၏အသက်အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့လျက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်နေတိုးနိုင်ငံများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံတကာအသိုက်အ ၀ န်းသည်၎င်းတို့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေရန်တာဝန်ရှိသည်။ တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်သည် ၂၁ သို့ရောက်ရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သောသူတို့၏တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မည့်သူများ၏အသက်များကိုကယ်တင်ခြင်း၌ကောင်းစွာတည်ရှိနေနိုင်သည်။st ရာစုနှစ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း ငါတို့အားလုံးကိုသူတို့ကိုထုတ်ရမယ်။ ပြည့်ဝပြီးပြည့်စုံသောဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်ကျင့်ဝတ်နှင့်လက်တွေ့ကျသောလိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားတစ် ဦး အနေနှင့် [မင်းရဲ့တိုင်းပြည်]အာဖဂန်နစ္စတန်မှထွက်ခွာရန်ကြိုးပမ်းနေသူအားလုံးကိုကယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်၏အစိုးရအားအခြားနိုင်ငံများနှင့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းသည်။ အာမခံချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသနားခံသည်။
အခြားနိုင်ငံများသို့ကုန်းကြောင်းမှ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်နှင့်လုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများပေးနိုင်ရန်ထိုနယ်စပ်များကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။
နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောနိုင်ငံများ၊ လက်ရှိဘေးလွတ်ရာနေရာများနှင့်အခြားနိုင်ငံများသို့လေကြောင်းခရီးများလက်ခံမည့်သူများ၊ ကြိုဆိုသူများနှင့်ယာယီစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ၊
UNHCR နှင့် World Taekwondo အဖွဲ့မှစခန်းများတွင်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အစီအစဉ်များတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးပါဝင်သည်
မတ်လ 16, 2016 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
အားကစားနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးကိုပေါင်းစပ်ထားသောဒုက္ခသည်စခန်းများရှိအစီအစဉ်များကို UNHCR မှ World Taekwondo Federation (WTF) မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ WTF သည်မကြာမီဖန်တီးမည့် Taekwondo လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူတူရကီနှင့်ဂျော်ဒန်ရှိဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များအတွက်စခန်း ၂ ခုတွင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သောရှေ့ပြေးအစီအစဉ်များအတွက်နည်းပြများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုပေးလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းအသစ်များသည် taekwondo ကိုကိုလံဘီယာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ “ UNHCR ကဒုက္ခသည်များ၏ဘဝကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ထိုသဘောတူညီချက်သည်ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်” ဟုပြင်ပဆက်ဆံရေးဒါရိုက်တာဒန်နီယဲလ်အဲန်ဒရက်စ်ကပြောသည်။ ဒုက္ခသည်များအားအားကစားနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကူညီရန်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတက်ကြွစွာလုပ်အားပေးခဲ့သည့်အတွက် WTF အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လာမယ့်လတွေနဲ့နှစ်တွေမှာသူတို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ” [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဇြန္လ 24, 2021 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
သမ္မတဘိုင်ဒန်ထံပေးပို့သောစာတွင်အာဂျန်အမျိုးသမီးများအားလုံခြုံရေးနှင့်အာမခံချက်များတိုင်းပြည်မှအမေရိကန်စစ်တပ်များရုပ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မေလ 18, 2021 သဘော 0
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign ကငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအသိုက်အ ၀ န်းအားအာဖဂန်နစ္စတန်မှတပ်များရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှအခွင့်အလမ်းများကိုမေးမြန်းရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစစ်တပ်မှလူ့လုံခြုံရေးစနစ်သို့ပြည့်စုံသောထိရောက်သောကူးပြောင်းရေးမဟာဗျူဟာဒီဇိုင်းဆီသို့ ဦး တည်သောပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]